Koraaya strawberries ee lagu koriyo ah | February 2020
Ugu Weyn Ee Koraaya strawberries ee lagu koriyo ah
Noocyada strawberries sii kordhaya ee lagu koriyo ah
Berry Tani sida strawberries sida qof walba. Inkastoo ay tahay mid degdeg ah, bannaanka ayaa weli jecel dhaqankaas. Cagaarshow waxay ku koraan guryaha waddanka, beeraha hortooda, hotbedska iyo qofkasta oo riyooyin ah helitaanka dhalidda sare. Laakiin si aad u hesho, waa inaad u hoggaansamaan tallaabooyinka kala duwan ee agrotechnical. Meelaha ugu wanaagsan ee loo beerayo strawberries waa beeraha hore iyo koriyo.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Koraaya strawberries ee lagu koriyo ah 2020